सबैले थाहा पाउनुहोस् दरबारमार्ग पुगेर ब्राण्डेडको नाममा २७ सयको सामानलाई २७ हजार तिर्ने हामी • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
सबैले थाहा पाउनुहोस् दरबारमार्ग पुगेर ब्राण्डेडको नाममा २७ सयको सामानलाई २७ हजार तिर्ने हामी
काठमाडौं । विदेशी सामान आयात गरेर बेच्ने नेपाली कम्पनीले कति प्रतिशतसम्म नाफा राख्लान् ? २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत ? तर तपाई दरवारमार्गका ‘ब्रान्डेड सोरुम’ मा पुग्नु भयो भने त्यो गलत ठहर्ने छ। त्यहाँ तपाईको अनुमान भन्दा धेरै नाफा राखेर सामान बेच्ने गरिएको सोमबार आपुर्ति मन्त्रालयले गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ। कानून अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्न पाइदैन। तर ति सोरुमहरुले १ हजार प्रतिशत सम्म नाफा राखेर कानुनको धज्जीमात्र उडाएका छैनन, उपभोक्तामाथी सरासर लुट गरिरहेका छन्।
‘उपभोक्तालाई ठग्नेहरुलाई कुनै पनि प्रकारको कानूनी छुट दिइने छैन’, आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘कठोर कारबाही गरिनेछ।’